किन भयो बेबेक र बेनिशाको प्रेम र बिछोड ? (भिडियो हेर्नुस)
काठमाडौँ. बिबेक सिंह ठकुरी र बेनिशा हमाल नेपाली म्युजिक भिडियो क्षेत्रमा चर्चित र ख्याती प्राप्त नाम हो। यस भन्दा अघि धेरै म्युजिक भिडियोहरुमा एकै साथ अभिनय गरेर दर्शकको मनमा बस्न सफल भएका भी. जे. बिबेक र अभिनेत्री बेनिशा हमाल पुन: एक पटक सँगै देखिएका छन। गायक संजीव सिंहले पछिल्लो पटक गाएको गीतको भिडियोमा यी दुई जोडीलाई देख्न सकिन्छ। ‘बितेर गयो दिन’ बोल रहेको उक्त गीतको भिडियोमा बिबेक र बेनिशाको प्रेम र बिछोडलाई निकै राम्ररी देखाउन खोजिएको छ। गीतको भिडियोमा प्रविन श्रेष्ठको निर्देशन रहेको छ।
गायक संजिव सिंह कै शब्द तथा संगीत रहेको उक्त गीत मोक्क्ष प्रोडक्सनको अफिसियल युब्त्युब च्यानलबाट सार्वजनिक भएको हो। गीतको भिडियोलाई ज्ञानेन्द्र शर्माले खिचेका हुन सार्वजनिक गीत र भिडियोका सम्पूर्ण टिमलाई बधाई तथा शुभकामना ।